Chatime (San Yeik Nyein Gamone Pwint) | မြန်မာ စားသောက်ဆိုင် လမျးညှနျ Myanmar Restaurant Guide Drecome Eat and Health
Chatime (San Yeik Nyein Gamone Pwint) | Kamayut
Chatime (San Yeik Nyein Gamone Pwint)
Chatime (Gamonepwint Hledan Branch) သည် ဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက် ၄လွာ၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ ကမာရွှတ်မြို့ နယ်တွင်တည်ရှိပြီး ခေတ်မှီအအေးမျိုးစုံကို ရောင်းချသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည် နှင့် အအေးများကိုသာ အဓိကထားရောင်းချပြီး ဈေးနှုန်းအနေနှင့် အနည်းဆုံး ၂,၅၀၀ ကျပ်မှ အများဆုံး ၅,၀၀၀ ကျပ်အထိရှိပါတယ်။ ဆိုင်၏အရောင်းရဆုံးနှင့် လူကြိုက်အများဆုံးမှာ ပုလဲနို့လက်ဖက်ရည်နှင့် Chatime ကော်ဖီတို့ဖြစ်ပါတယ်။ Chatime ကော်ဖီကို ကိုယ်ပိုင်ဆန်းသစ်သောအရသာနှင့် ဖျော်စပ်ထားသောကြောင့် အခြားဆိုင်များနှင့် မတူပဲ တစ်မူထူးခြားတဲ့အရသာကို ခံစားသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ကို ပြင်ပအစားအစာယူဆောင်လာခွင့်ရှိသောကြောင့် Chatime ရှိ အအေးများနဲ့ အတူသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားသောအရသာနှင့် နိုင်ငံတစ်ကာအဆင့်မှီသောအအေးအမျိုးမျိုးတို့ကို ရရှိနိုင်သောကြောင့် Customer များကြိုက်နှစ်သက်သည့်နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။
No. 416, 4th floor, Gamonepwint Shopping Center (Hledan), Insein Rd., Kamaryut Tsp.
အနီးအနား စနျး Yeik ညိမျး မှတ်တိုင်4မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်